Ao India, lahatsary iray mitondra fanairana ny amin’ireo ankizy mararin’ny donika · Global Voices teny Malagasy
Tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pisorohana aretina ny vakisinin'ny donika
Voadika ny 30 Marsa 2019 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, नेपाली, English
Solontenan'ny Vondrom-piarahamonina Video Volunteer Shabnam Begum. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube.
Nosoratan'i Grace Jolliffe ny lahatsoratra ary nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, vondrom-piarahamonina mpampita vaovao iraisampirenena nahazo loka miorina ao India. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mitohy miely tsy manampitsaharana ao India, ny donika, izay mora miely haingana satria tsy tafiditra ho anisan'ny vakisiny vonona sy maimaimpoana ao amin'ny Programam-pisorohana manerantany (UIP) ao amin'ity firenena voatonona ity. Namokatra lahatsary mitatitra ny fiparitahan'ny aretina tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra iray tao Varanasi an-tanànakelin'i Danganj Bidur ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteer antsoina hoe Shabnam Begum ary niteraka fifantohana tamin'ny olana izany.
Avy ao Varanasi, Uttar Pradesh i Shabnam, mpampianatra teo aloha. Indro ny lahatsariny:
“Rehefa nijery tao amin'ny lisitry ny mpanatrika izahay, dia nahita fa maro ny ankizy tsy tonga. Nahita izahay fa tratran'ny donika ny ankizy,” hoy i Ramchand, mpampianatra ao amin'ny sekoly fanabeazana fototra.
Araka ny nolazain'ny OMS, ny donika dia aretina avy amin'ny viriosy izay mifindra eo amin'ny samy olombelona mivantana na amin'ny alalan'ny rivotra. Aretin'ankizy tsotostra, matetika mahazo ny kilonga dimy ka hatramin'ny sivy taona. Na izany aza, mety hahazo ny olon-dehibe ihany koa anefa ny viriosin'ny donika rehefa sarotsarotra sy henjakenjana kokoa. Ny fahasarotana avy amin'ny donika dia mety hahazoana aretin'ny fonon'ny atidoha (tafakatra hatrany amin'ny 15%-n'ny tranga), fanaintainana amin'ny voa na mahalasa marenina. Tena tranga vitsy dia vitsy ny donika no mety hiteraka aretin'ny atidoha sy fahasimbana maharitra mahazo ny hozatra. Efa nisy ny vakisiny isorohana ny aretina hatramin'ny taompolo 1960s ary amin'ny ankapobeny, firenena 120 no nampiditra ny vakisinin'ny donika ao amin'ny fandaharam-pirenena isorohana ny aretina. Mbola tsy ao anatin'izany anefa i India.
Rehefa namokatra ny lahatsary etsy ambony manasongadina ny fielezan'ny aretina i Shabnam, nampisehoany tamin'ny dokoteran'ny tobim-pahasalamana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Cholapur, sampana ao Varanasi izany. Nitsidika ny sekoly ny dokotera avy eo ka nojerena avokoa ny mpianatra rehetra ary nomena fanafody.
“Mbola manohy amin'ny fitsidihana ireo dokotera mandra-pahasitran'ny ankizy rehetra. Iray volana no lany vao nihatsaratsara kokoa ny kilonga,” hoy i Ramchand.
Nilaza i Shabnam izay miasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, fanabeazana, fahadiovana ary ny miralenta fa hanohy amin'ny fampiasana ny fakantsariny ho fitaovana hampakarana ny feon'ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika misy azy izy. Ary hanohy amin'ny fanairana sy fanetsehana ny vondrom-piarahamonina misy azy.